Archive de l'auteur | NewsMada | Page 1424
Medias : la radio, principale messagère
Par Taratra sur 15/02/2016 NS Français, Opinion
La journée internationale de la radio, samedi dernier, n’a pas été oubliée par les professionnel des médias. «Il s’agit d’une journée importante pour tous les professionnels des medias, plus particulièrement la radio, dans la mesure où c’est un moment où nous pouvons exprimer ensemble, avec d’autres consœurs, des messages à la population ». Tel est la […]
Mananjary : ambany ny karaman’ny mpampianatra
Par Taratra sur 15/02/2016 Economie, NS Malagasy
Tany amin’ny distrikan’i Mananjary indray ny fampahalalana ny fiahiana ara-tsosialy eny amin’ny sekoly katolika (Dinec), miaraka amin’ny Tahirim-pirenena misahana ny fiahiana ara-tsosialy (Cnaps), ny herinandro lasa teo. Toy ny toerana ambanivohitra rehetra, ambany ny karaman’ny mpampianatra sy ny mpanabe, ka sahirana ny talen-tsekoly amin’ny fanatanterahana ny fiahiana ara-tsosialy, nefa ts maintsy hajaina ny karama farany […]
Antsirabe : tanora 32 nahazo fiofanana « Dual »
Natolotra ny talata 9 febroary teo, teto Antsirabe, ny mari-pahalalana ho an’ireo 32 mianadahy niofana momba ny asa, ao anatin’ilay antsoina hoe « Dual ». Nahatanterahana izany ny Antenimieran’ny varotra sy ny indostria (CCI) Vakinankaratra. Afaka manaraka azy ny tanora manana bakalorea, ary afaka manao ny asa « assistant bancaire », teknisianina ara-barotra, technique de secretariat, informatika, mekanika elektronika, […]
Androy : olona telo maty vokatry ny tsy fanjarian-tsakafo
Par Taratra sur 15/02/2016 Faits Divers, NS Malagasy
Telo ny olona maty tany amin’ny faritra Androy ny volana janoary (telo herinandro lasa) teo . Ny iray, zazavavy 13 taona monina ao amin’ny fokontany Ankilirandro, 5 km avy eo amin’ny distrikan’Ambovombe-Androy. Tsy mbola tena voafaritra mazava ny antony nitarika ny fahafatesan’ity ankizy ity. Satria nandritra ny fidinan’ny delegasiona (mpiandraikitra ny kaominina, mpitsabo, zandary, minisiteran’ny […]
Seho Saint Valentin… : samy nahazo ny anjarany ireo mpifankatia
Par Taratra sur 15/02/2016 NS Malagasy, NS-Culture
Na teo aza ny erika nifafy, tsy nahasakana ny mpifankatia tsy hanamarika ny fetin’izy ireo izany, hatramin’ny zoma teo. Porofon’izany ny fahombiazan’ireo hetsika samihafa teto an-dRenivohitra. Hetsika maroloko ka samy nahazo ny anjarany ny tsirairay. Landy R., Tiana,
Kaoperativa Avotra 162 : haverina ny 26 febroary ny fifidianana filoha
Par Taratra sur 15/02/2016 Divers, NS Malagasy
Haverina ny fifidianana izay ho filoha mpitantana ny kaoperativa 162 Avotra. Tsy mbola misy filoha mitondra ny kaoperativa amin’izao fotoana izao vokatr’izay ary tsy mandoa ny fandraisana anjara 4 000 Ar isan’andro intsony ny fiara rehetra miasa, araka ny tapaka nandritra ny fivoriana natao omaly teny amin’ny CEG Analamahitsy. Saika hotanterahina omaly ny fifidianana ny filoha […]
Par Taratra sur 15/02/2016 En Bref, NS Malagasy
Momba ny toetry ny andro anio, ho an’ny tolakandro, hanorana tandrifin-drahona arahin-kotroka any Diana sy Sava, miampy ny any Menabe , Atsimo Andrefana ary Androy. Hanorana malefaka ny faritanin’i Toamasina, Antananarivo sy Fianarantasoa. Handrahona na handrahona vitsy ny faritra sisa rehetra. Betsaka sahady ny toerana difotry ny rano, omaly, vokatry ny orana nijojo ny asabotsy […]
“Marathon de Dakar” : laharana faha-11 i Hajanirina
Tsy afa-nanoatra i Hajanirina, nanoloana ireo kalazalahy kenyanina, nandritra ny fanatanterahina ny “Marathon de Dakar”. Tany amin’ny laharana faha-11, no nisy azy, tamin’izany fifaninanana izany. Tsy ratsy ny vokatra azon’i Hajanirina, teo amin’ny fifaninanana “Marathon de Dakar”, natao ny asabotsy lasa teo, tany Sénégal. Laharana faha-11 no nisy azy, tamin’ity ary 2 ora 25 mn […]
Rugby : nahemotra ny fambolen-kazon’ny federasiona
Par Taratra sur 15/02/2016 NS Malagasy, NS-Sports
Alevina anio any Castres, Frantsa, ny nofo mangatsiakan’i Jean-Luc Barthez, talen’ny fampandrosoana ny rugby aty Afrika. Noho ity fandevenana ity, voatery nahemotra amin’ny fotoana manaraka ny fambolen-kazo, tokony notanterahin’ny federasiona malagasin’ny rugby. Ny faran’ny herinandro lasa teo, ny voatondro fa hanaovana izany, tany Mandraka. Nanapa-kevitra, araka izany, ny komity mpitantana eo anivon’ny federasiona fa hatao […]
Hanamorana ny asa : nahazo ordinatera ny CEG Manandriana
Nahazo ordinatera iray avy ny EPP Ambohibao sy ny CEG Manandriana Avaradrano avy amin’ny vadin’ny filoham-pirenena, Rajaonarimampianina Voahangy ny faran’ny herinandro teo teny Ambohitsorohitra. « Hanampy amin’ny fandrindrana ny asa fitantanana ny sekoly sy hikarakarana ny fanadinana samihafa ny fitaovana vaovao », hoy ny mpitantana ny CEG Manandriana, Randriamihaja Solofo. Efa miroso amin’ny fampiasana ny informatika rahateo […]
Kianja filalaovam-baolina : nambolena fandrotrarana i Mahamasina
Nanomboka ny talata 9 febroary lasa teo ny fambolena bozaka tao amin’ny kianjaben’i Mahamasina. Araka ny nambaran-dRasoanaivo Charly, tomponandraikitra misahana izany, bozaka fandrotrarana gasy ihany no novolena eo aminy. Mitovy karazana amin’ilay bozaka “green” avy atsy Afrika Atsimo, ihany izy io, fa ny fikarakarana azy ihany ny mahatsara sy maharatsy azy, fa ny azo antoka […]
Kitra – Tompondakan’i Afrika 2016 : resin’ny Cnaps tao amin’ny kianjany ny Gor Mahia Kenya
Nivoaka ho mpandresy teo amin’ny lalao mandroso, amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika, ny Cnaps Sport. Lavony teo amin’izany dingana izany ny Gor Mahia, avy any Kenya. Fahombiazana ny lalao voalohany nataon’ny Cnaps Sport, teo amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika. Resiny, tamin’ny isa 2 noho 1, ny Gor Mahia, tompondakan’i Kenya. Fihaonana mandroso, notanterahina […]
Basikety – «Amboaran’ny Filoha» : misongadina ny 2BC Vakinankaratra
Anisan’ny ekipa misongadina, eo amin’ny fiadiana ny amboaran’ny Filoha amin’ny fahazoana fandresena, raha ho an’ny faritra andrefana, , eo amin’ny taranja basikety, ny 2BC Vakinankaratra. Fihaonana izay hatao any Tsiroanomandidy. Nomontsaniny, tamin’ny isa mazava, 77 noho 46, ny Fanatic avy any Vakinankaratra ihany. Lalao izay tsy niady satria nanantombo teo amin’ny tanjaka sy ny taktika, […]
Kitra – Amboaran’ny kaonfederasiona : resin’ny Harare FC tany amin’ny minitra farany ny Adema
Lavon’ny Harare FC, tamin’ny isa tery 3 noho 2, ny AS Adema, teo amin’ny lalao mandroso, amin’ny fiadiana ny amboaran’ny kaonfederasiona. Fihaonana notanterahina tao amin’ny kianja Harare, Renivohitr’i Zimbaboe, ny asabotsy tolakandro lasa teo. Niady ny fihaonana ary ekipa tsy atahorana mihitsy ny Zimbaboeanina. Raha ny tati-baovao, efa tany amin’ny fiafaran’ny fotoana (88 mn) vao […]
Kitra atsy Afrika : naka mpilalao brezilianina ny Tout Puissant Mazembe
Nanamboatra ny mpilalao mandrafitra azy ny Tout Puissant Mazembe, avy any RD Kongo, ankehitriny. Fantatra izao fa nanamafy ny lohalaharany izy ireo ka naka mpilalao brezilianina. Marco Antonio Silva Cortez ny anaran’io mpilalao io. Nilalao tany amin’ny klioban’ny Al Orooba, Emirats Arabo mitambatra izy io, teo aloha. Nahatafiditra baolina 21 izy, nandritra ny fifaninanam-pirenena arabo. Tsy […]
R. Hasimpirenena, filoha nasionalin’ny Mafami : « Tsy misy fandrosoana raha tsy mivondrona sy manambatra hery »
Par Taratra sur 15/02/2016 NS Malagasy, NS-Politique
Fihaonambe voalohany amin’ny itantanan’ny filoha nasionaly vaovao, R. Hasimpirenena, ny Mafami ny asabotsy teo. Tratra ny tanjon’ny fikambanana amin’ny fampihavanana sy fampivondronana ho anjara biriky amin’ny fampandrosoana ny firenena. Olona avara-pianarana avokoa rahateo ny mpikambana. Tontosa ny asabotsy teo teny amin’ny Batou Beach Ambohimanambola ny fihaonambe voalohan’ny fikambanana Mafami, ivondronan’ny mpianatra eny amin’ny ambaratonga […]
Olan’ny Gem sy ny fanjakana : andrasana ny fifampidinihana
Tsy mbola nivaha ny olana! Araka ny notaterina teto, nilaza ampahibemaso ny Vondron’ny mpandraharaha eto Madagasikara (Gem) fa tsy hifampidinika amin’ny fanjakana intsony izy ireo raha tsy foanana ny didy mamaritra ny Advanced Cargo Declaration (ACD). Nohazavain’izy ireo fa tsy mifanaraka amin’ny lalàna mifehy ny varotra iraisam-pirenena sy ny hetra eto Madagasikara ny faneren’ny fanjakana […]
Kolo TV/FM – Valy Tiana : lasan’i Victor sy Marthe mivady ny tany 320 m2
Anisan’ireo tsara vintana nahazo ny tany 320 m2 eny Fonenana Imerintsiatosika avy amin’ny Master Immobilier Services Razanajatovo Victor sy Razafiarisoa Marthe mivady. Niainga tamin’ny lalao nokarakarain’ny Kolo TV/FM sy ny Valy Tiana ny fisarihana nahazoan’izy ireo izany tamin’ny fanamarihana ny fetin’ny mpifankatia, ny asabotsy teo. Nanatona ny mpijery sy mpihaino ny Kolo TV/FM ny ekipan’ny […]
Any Inde efa hatramin’ny herinandro teo ny filoha teo aloha, Ravalomanana. Niala an-tanindrazana ny herinandro teo izy, niray fiaramanidina amin’ny vadin’ny filoha, Rajaonarimampianina Voahangy, sy ny filohan’ny Tetezamita, Rajoelina, nihazo an’i Maorisy. Tafiditra amin’ny famelomana indray ny orinasa Tiko izao diany any izao. Efa fito herinandro izao, tsy mbola voatendry ny talen’ny TVM. Notapahin’ny filankevitry […]
Oniversite GSI : hisokatra amin’ny any ivelany
“Misokatra amin’ny any ivelany, ary efa misy ny fifanarahana vita ny amin’ny oniversite GSI sy ireo mpiara-miombon’antoka aminy”, hoy ny fanazavan’ny filohan’ny GSI, Randrianaivo Geremioh. Ity farany izay nahazo fifanarahana tamin’ny minisitry ny Fambolena frantsay, Stéphane Le Foll, ny volana janoary lasa teo, nandritra ny diany tany Frantsa, nandray anjara tamin’ny atrik’asa lehibe momba ny […]
Mangamila Anjozorobe : mpianatra sivy vavy indray nihetsika ambalavelona
Tsy nijanona tany Morondava na Miandrivazo intsony ny resaka ambalavelona fa tonga hatrany Anjozorobe. Lasibatra indray ny tovovavy tany an-toerana. Mpianatra sivy vavy no indray nihetsika an’ity aretina hafahafa ity tany Mangamila Anjozorobe. Manodidina ny 14 ka hatramin’ny 17 taona eo ireo, ka ny roa amin’ireo mpianatry ny lycée ary ny fito mpianatry ny CEG. […]
Anosizato : jiolahy roa voatifitry ny tompon-trano voatafika
Sambany, mba ny tompon-trano notafihana indray no nahatifitra ireo jiolahy. Teny Anosizato nitrangan’izany ny asabotsy alina teo. Araka ny vaovao voaray, fito lahy mitondra basy sy fitaovam-piadiana mahery vaika nanafika tamina tranombarotra iray, ka teo am-pitaomana ny menaka tamin’ny “bidon” izy ireo no hitan’ny tompon-trano. Teny ambony rihana, trano mifanila amin’ny fitoeran’entana no misy ireto […]
Praiminisitra Ravelonarivo : “Tsy vita irery ny fampandrosoana”
“Tsy vita indray andro sy tsy vitan’olona irery ny fampandrosoana, fa manana andraikitra lehibe amin’ny toerana misy antsika tsirairay avy isika. Andao hanambatra hery hijery ny faritra niaviantsika, hijery ny hoavin’i Madagasikara.” Kabarin’ny Praiminisitra Ravelonarivo io, tamin’ny lanonana fifampiarahabana noho ny taona vaovao 2016 nataon’ny fikambanana Grand sud-est, teny amin’ny By Pass, afakomaly. Ilaina ny […]
Lozam-pifamoivoizana : nitsoaka ilay vazaha nitondra 4×4 nahafaty olona
Rangahy iray niampita arabe, nodomin’ny fiara 4×4 nentina vazaha, ny asabotsy alina teo, ka maty tsy tra-drano izy io, teny Ampandrianomby. Ny maraina vao hita faty ity voadonan’ny fiara. Araka ny fanazavana azo, ana vazaha io fiara io, izay nisy nahatsikaritra ihany. Nitsoaka ilay vazaha sy ny fiarany raha vao nitranga ny loza. Efa naterina […]
Filankevitra nasionaly teny Ivato : noroahina ny mpikamban’ny Leader Fanilo miisa 11
Ny an’iza na iza no marina? Nampiato ny birao nasionaly mpandrindra, tarihin-dRakotomamonjy Jean-Max, ny komity mpihevi-draharaha izay nijoro ho filankevi-pifehezana, ny 16 desambra 2015. Namaly izany ireo naato, nampiantso filankevitra nasionaly tsy ara-potoana, teny Ivato, afakomaly. Tapaka tamin’izany fa roahina ny mpikambana miisa 11: Esoavelomandroso Manassé, Andriamiarisatrana Noël, Rabesa Zafera Antoine, Mahosindrahaja Heriniaina, Raveloson Hasina, […]
« Précédent 1 … 1 422 1 423 1 424 1 425 1 426 … 1 464 Suivant »